သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏မေတ္တာဖြင့် ပွင့်သော သာသနာ့ပန်းပွင့်လေးများ အိမ်ပြန်ပြီ – Daily Feed MM
Admin_John | May 14, 2020 | Local News | No Comments
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပိတ်မိနေကြသူများအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သီတဂူဝိပဿနာအကယ်ဒမီနှင့် သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တို့တွင် community based facility quarantine ကို ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ၂၁ ရက်တာ စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုထားရှိခဲ့ပါသည်။
၁၃-၅-၂၀၂၀ ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွ ဝန်ဆောင်သံဃာတော်များ၊ ဝေယျာဝစ္စပရိသတ်များက ကွာရင်တင်း ၂၁ ရက်နေထိုင် သီတင်းသုံးကြသော သံဃာတော်များကို နှုတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး (မိတ္ထီလာ၊ မကွေး၊ တောင်ငူ၊ ရန်ကုန်အစရှိသော) နေရပ်ဌာနေအသီးသီး သို့ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပထမအသုတ် အိန္ဒိယပြန်ကျောင်းသား သံဃာတော်တစ်ပါးလျှင် ကျပ်ငွေ ၂သိန်းနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀ စီ လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြပါသည်။
"ဂန္တဝင်မြောက်အိမ်အပြန်ခရီး"! Quarantine ! > check out <ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပိတ်မိနေကြသူများအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သီတဂူဝိပဿနာအကယ်ဒမီနှင့် သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တို့တွင် community based facility quarantine ကို ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ၂၁ ရက်တာ စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုထားရှိခဲ့ပါသည်။၁၃-၅-၂၀၂၀ ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွ ဝန်ဆောင်သံဃာတော်များ၊ ဝေယျာဝစ္စပရိသတ်များက ကွာရင်တင်း ၂၁ ရက်နေထိုင် သီတင်းသုံးကြသော သံဃာတော်များကို နှုတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး (မိတ္ထီလာ၊ မကွေး၊ တောင်ငူ၊ ရန်ကုန်အစရှိသော) နေရပ်ဌာနေအသီးသီး သို့ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ပထမအသုတ် အိန္ဒိယပြန်ကျောင်းသား သံဃာတော်တစ်ပါးလျှင် ကျပ်ငွေ ၂သိန်းနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀ စီ လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြပါသည်။သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ လက်တွဲညီညာ ဆောင်ရွက်ကြကုန်သော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်း၊ အလှူရှင်အပေါင်း၊ လုပ်အားဒါန ကုသိုလ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်သော ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အားလုံးတို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။*သူလည်းဝမ်းသာ-ငါလည်းရွှင်ပြုံး*#နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားhttps://www.facebook.com/sitagulivedhamma/videos/283754279453299/သဗ္ဗေ ဘဒြာနိ ပဿန္တုအကောင်းမြင်ဝါဒ ထွန်းကားပါစေ။#ဓါတ်ပုံသတင်းhttps://www.facebook.com/373346706204380/posts/1364335587105482/#သီတဂူ #sitagu=======================သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာ ရှိကြပါစေ။သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့=======================Posted by သီတဂူသတင်း📸 – သီတဂူကျော်ဆန်းဝင်း🎥 – သီတဂူထိန်လင်းဦး🎥 – သီတဂူမောင်မောင်
Posted by သီတဂူဆရာေတာ္ဓမၼသဘင္ – LIVE on Wednesday, May 13, 2020
သဗ္ဗေ ဘဒြာနိ ပဿန္တု အကောင်းမြင်ဝါဒ ထွန်းကားပါစေ။
"ဂန္တဝင်မြောက်အိမ်အပြန်ခရီး"! Quarantine ! > check out <ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်…
Posted by သီတဂူဆရာေတာ္ႏွင့္သီတဂူသတင္းမ်ား on Wednesday, May 13, 2020
ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ Covid-19 ေၾကာင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ပိတ္မိေနၾကသူမ်ားအား ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး သီတဂူဝိပႆနာအကယ္ဒမီႏွင့္ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္တို႔တြင္ community based facility quarantine ကို ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက္ေန႕မွ ၁၃-၅-၂၀၂၀ ရက္ေန႕အထိ၂၁ ရက္တာ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရႈထားရွိခဲ့ပါသည္။
၁၃-၅-၂၀၂၀ ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဝန္ေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေဝယ်ာဝစၥပရိသတ္မ်ားက ကြာရင္တင္း ၂၁ ရက္ေနထိုင္ သီတင္းသုံးၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး (မိတၳီလာ၊ မေကြး၊ ေတာင္ငူ၊ ရန္ကုန္အစရွိေသာ) ေနရပ္ဌာေနအသီးသီး သို႔ ၁၄-၅-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ နံနက္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအသုတ္ အိႏၵိယျပန္ေက်ာင္းသား သံဃာေတာ္တစ္ပါးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၂သိန္းႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ စီ လႉဒါန္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။
သေဗၺ ဘျဒာနိ ပႆႏၱဳ အေကာင္းျမင္ဝါဒ ထြန္းကားပါေစ။